शरीरभित्र लुकाएर ल्याइएको ३५ लाखसहित दुई पक्राउ - Samaya Sandarva
शरीरभित्र लुकाएर ल्याइएको ३५ लाखसहित दुई पक्राउ
शनिबार, फाल्गुन २५, २०७५ १८:४७ - समय सन्दर्भ
नेपालगञ्‍ज– बाँके प्रहरीले तीन दिनअघि शरीरका विभिन्‍न ठाउँमा राखेर ल्याइएको ३५ लाख ४४ हजारसहित दुई जनालाई पक्राउ गर्‍यो। विशेष सुराकका आधारमा प्रहरीले नेपालगञ्जको पासाङल्हामु मार्गबाट साँझ ६ बजेतिर ३५ वर्षीय भारतीय नागरिक रविश पाठक र १२ वर्षका छोटु तिवारीलाई पक्राउ गरेको थियो।
शरीरका विभिन्न भागमा राखेर ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ किन ल्याइयो? अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। भारतीय नागरिक भएपनि रविशको परिवार जमुनाहामा किराना पसल सञ्चालन गरेर बस्छन्। रविश भन्सारमा ‘एजेन्ट’ को काम गर्थे।
पैसाको स्रोत नखुलेपछि बाँके प्रहरीले पैसासहित रविशलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ। रविशको घरपरिवारले बैंकमा राख्नका लागि पैसा लगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बैंकमा राख्‍नका लागि ल्याएको हो भने किन लुकाएर ल्याइयो? अनि, रविशले किन पैसा आफ्नो हो भनेर स्वीकार गरेनन्?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका मुद्दाफाँटका इन्चार्ज दीपक मल्लले पैसाको स्रोत नखुलेपछि पैसा र मान्छेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाएको बताए। ‘पक्राउ परेका व्यक्तिले भरियामात्रै हो भनेपछि हामीले पैसाको मालिक को हो भनेर खोज्यौँ। कोही पनि मेरो पैसा हो भनेर आएनन्’, मुद्दा फाँटका इन्चार्ज मल्लले भने, ‘त्यसपछि हामीले पैसा र मान्छेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठायौं।’
बरामद रकम दुई नम्बरी हो भन्नेमा दुईमत रहेन। तर, किन नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ बाहिर आएको छैन। एक थरीले त्यो पैसा सुन किन्न, हुन्डीको या फिरौती हुन सक्ने आशंका गरेका छन्।
मुद्दाफाँटका इन्चार्ज मल्लले छिट्टै वास्तविकता बाहिर आउने बताए। ‘हामी लागिरहेका छौं। त्यत्तिका रकम किन र कसलाई दिन नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो। बाहिर आउँछ’, मल्लले भने, ‘अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
बुढानिलकण्ठ दुर्घटनामा अभिनेत्री परमिता आरएल राणा मुछीइन
सिन्धुपाल्चोकको गुन्सामा एक युवकको विभत्स हत्या
गाई चोर्न खोज्दा बाँकेमा एकजना घाइते